10 ရထားပေါ်မှာဘယ်လိုအိပ်ရမလဲ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ရထားပေါ်မှာဘယ်လိုအိပ်ရမလဲ
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 19/02/2021)
3 နာရီသို့မဟုတ် 8 နာရီ – ရထားခရီးစဉ် အနားယူရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောနေရာဖြစ်သည်. လမ်းတွေပေါ်မှာအိပ်မောကျနေရင်မင်းကအခက်တွေ့နေတယ်, ကျွန်တော်တို့၏ 10 ရထားပေါ်မှာဘယ်လိုအိပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကလေးငယ်လိုအိပ်စေပါလိမ့်မယ်. ရထားမှမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမည်သည့်ရထားပေါ်တွင်မဆိုကောင်းသောအိပ်မက်များအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတွင်အတွင်းလူ၏အကြံဥာဏ်များသို့သွားပါ, ကျွန်ုပ်တို့သည်ချိုသောအိပ်မက်များသို့ခရီးစတင်နေကြသည်!
1. ရထားပေါ်မှာဘယ်လိုအိပ်ရမလဲ: စောင်တစ်လုံးယူလာပါ
ရထားပေါ်ကရာသီဥတုကငရုတ်သီးဖြစ်လေ့ရှိတယ်, နှင့်သင်ရှည်လျားသို့မဟုတ်ရှိပါက ညရထားခရီးစဉ် ရှေ့, ပြင်ဆင်ထားဖြစ်. သင်၏ခရီးစဉ်အတွက်စိတ်အေးလက်အေးစိတ်အေးအေးထားသင့်သည်, နှင့်အလင်းရောင်စောင်အစဉ်အမြဲ coziest ရထားခရီးသွားလာဖို့အဖြေနိုင်ပါတယ်.
အိပ်စက်ခြင်းမရှိသောညများနှင့်သင်၏ခရီးစဉ်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းသို့မဟုတ် AC သို့မသွားစေရန်ရှောင်ရှားရန်, သင်အမြဲတမ်းစောင်ထုပ်ပိုးသင့်ပါတယ်. မည်သို့ပင်အပြင်ဘက်ရာသီ၏, ဒါကြောင့်ရထားများပေါ်တွင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနှင့်အနီးကပ်အမြဲပါပဲ. ဒါကြောင့်, စောင်တစ်ထည်ယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်ဆုံးမှတစ်ခုဖြစ်သည် 10 ရထားပေါ်မှာဘယ်လိုအိပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေ. စောင်အောက်မှာပုန်းအောင်းနေရခြင်းကသင့်ကို Dreamland ဆီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်.
2. Spotify တွင်သက်သောင့်သက်သာရှိသောစာရင်းဖွင့်ပါ
သင်၏နားများ၌စိုစွတ်စေသောသီချင်းများသည်အခန်းတွင်းဆူညံနေသောသို့မဟုတ်လူစည်ကားသည့်အချိန်၌သကြားလုံးကဲ့သို့ဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, သင်ကြားရသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်ဂီတဖြစ်သည်ကိုသေချာစေရန် Spotify တွင်သီချင်းစာရင်းအနည်းငယ်ကိုသင်ပြင်ဆင်သင့်သည်. ဤနည်းဖြင့်သင်ဘေးတွင်ရှိသည့်ခရီးသည်တစ် ဦး အားဟောက်ခြင်းသို့မဟုတ်စကားမပြောခြင်းမှလုံခြုံလိမ့်မည်.
သဘာဝအသံ, အနားယူ Vibil playlists, သို့မဟုတ်သင်အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်ထံမှတီးလုံး, များမှာ အကောင်းဆုံးစာရင်းစာရင်းရွေးချယ်မှုများ ရထားပေါ်မှာအိပ်မောကျစွာအိပ်စက်ခြင်းအတွက်. ဂီတတစ်ခုဖြစ်သည် 10 ရထားပေါ်မှာအိပ်ပျော်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေ, တိုတယ် ခရီးရှည်.
3. ရထားပေါ်မှာဘယ်လိုအိပ်ရမလဲ: တစ် ဦး ကိုဖွတ်လည်ပင်းခေါင်းအုံးယူလာ
တစ် ဦး souring နှင့်ခိုင်မာသောလည်ပင်းနှင့်အတူနှိုးထက်ပိုဆိုးဘာမှမရှိပါ. ထိုကွောငျ့, လည်ပတ်ခေါင်းအုံးသည်ရထားများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. ဒီလမ်း, လည်ပင်းကိုခိုင်ခံ့စေပြီ, မင်းအိပ်ယာထဲကနေနိုးလာလိမ့်မယ်, သင်၏မျက်နှာပေါ်တွင်အပြုံးနှင့်အတူ.
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, သင်တစ် ဦး ခိုင်မာသောလည်ပင်းနှင့်အတူအသစ်တစ်ခုကိုစွန့်စားမှုစတင်စွန့်စားပါတယ်, နေရာအသစ်အသစ်များကိုလေးစားခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးအမြင်များကိုဖမ်းယူခြင်းစသည့်နည်းလမ်းများမရှိပါ.
ကောင်းသော, soundproofing နားကြပ်များသို့မဟုတ်နားကြပ်တိုင်းအပေါ်ဖြစ်ကြသည် ခရီးသွားစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း. ရထားခရီးစဉ်အတွက်နားကြပ်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်, နှင့် Bon ခရီးများအတွက်သူတို့အား Spotify သီချင်းစာရင်း.
သင်၏နားကြပ်ကိုအိမ်တွင်သို့မဟုတ်ဟိုတယ်တွင်မေ့သွားလျှင်, ရထားဘူတာမှာစတိုးဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်. ဗဟိုကနေ အလုပ်များရထားဘူတာ သေးငယ်ပြီး off-the- ရိုက်နှက် - လမ်းကြောင်းဘူတာမှ, နားကြပ်သည်သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရှာနိုင်သည်.
5. ရထားပေါ်မှာဘယ်လိုအိပ်ရမလဲ: သက်သောင့်သက်သာဝတ်စားဆင်ယင်
အလွှာများ, ဝါဂွမ်း, နှင့် Eco-friendly ထည်အဝတ်ရထားစီးဘို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. စိတ်ကူး 8 ယားယံသောဆွယ်တာအင်္ကျီသို့မဟုတ်ပါးလွှာသောရှပ်အင်္ကျီရထားပေါ်တွင်နာရီ, နံနက်ယံ၌အိပ်ပျော်ညဥ့်နှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းအဘို့အကတိ.
ရထားပေါ်မှာညဝတ်အင်္ကျီဝတ်ပြီးသင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်သင်တန်းနည်းပြများနှင့် pullover ပြီးပြည့်စုံသောမီးရထား sleepwear ဖြစ်ကြသည်. အဆင်ပြေစွာဝတ်စားဆင်ယင်ထိပ်တစ်ခုဖြစ်သည် 10 ရထားပေါ်မှာဘယ်လိုအိပ်ရမလဲ, နှင့်အကောင်းဆုံးခရီးရှိသည်.
6. တစ် ဦး ကအိပ်စက်ခြင်းမျက်နှာဖုံးယူလာပါ
နောက်ထပ်ခရီးသွားရန်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာမှာအိပ်စက်ခြင်းမျက်နှာဖုံးဖြစ်သည်. ပြန်ချထားပါ, အိပ်စက်အနားယူရန်လိုအပ်သမျှအားလုံးသည်သင်၏မျက်လုံးများကိုဖုံးအုပ်ထားပါ. ဒါဟာသင်တစ်ကောင်းသောညအိပ်စက်ခြင်းချင်လျှင်တစ် ဦး လူသိများအချက်ဖြစ်ပါသည်, သငျသညျမဆိုစိတ်ဆိုးစေသောအာရုံပြံ့လှငျ့ဖယ်ရှားပစ်ရပေမည်, အလင်းရောင်တစ်ခုခုမှသင့်ကိုယ်သင်ဖယ်ရှားပါ.
အမှုဖွင့်လျှင်သင်သီးသန့်အခန်းတစ်ခုတွင်ခရီးမသွားပါ, နှင့်အလင်း switch ကိုထိန်းချုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, အိပ်မျက်နှာဖုံးကိုထုပ်ဖို့သေချာစေပါ. ထိုအခါ, အကယ်၍ သင့်ဘေးရှိခရီးသည်သည်ညအားဖတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်သို့မဟုတ်ရထားပေါ်ရှိအလင်းသည်အလွန်တောက်ပနေလျှင်သင်စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။.
7. ရထားပေါ်မှာဘယ်လိုအိပ်ရမလဲ: သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလုံခြုံစွာထားပါ
သင်၏ပခုံးပေါ်နှင့်အလွှာအောက်ရှိပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ်အိတ်တစ်လုံးသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလုံခြုံစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. သင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတွက်နေရာအလုံအလောက်ရှိမရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ, ပိုက်ဆံအိတ်, မိုဘိုင်း, သငျသညျတလျှောက်ယူဆောင်လာရန်စီစဉ်ထားအခြားမည်သည့် gadget များ.
ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်ကောင်းသောနှင့်စိုးရိမ်ပူပန် - အခမဲ့ရထားခရီးရှိသည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်, ပွင့်လင်းမျက်လုံးတစ်လုံးနှင့်အိပ်စက်ခြင်းထက်.
8. အဆိုပါရထား၏အလယ်၌တစ် ဦး ကရာအရပျစာအုပ်ဆိုင်
ချိုမြသောအိပ်မက်များအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာသည်ရထား၏အလယ်တွင်ရှိနေသည်. ဤအကြောင်းပြချက်မှာအလယ်ပိုင်းသည်မည်သည့်ဝင်ပေါက်မှမလုံလောက်ပါ, အမှု၌လမ်းပေါ်မှာမှတ်တိုင်များရှိပါတယ်. ဖြည့်စွက်ကာ, သင်လုံခြုံဖြစ်နှင့်ရေချိုးခန်းနှင့်မဆိုရနံ့ကနေဝေးအသံပါလိမ့်မယ်.
သို့သျောလညျး, သင်အိပ်ပျော်နေတဲ့ရထားပေါ်မှာခရီးသွားနေတယ်ဆိုရင်, အများဆုံးဖွယ်ရှိသင်သည်မည်သည့်စိန်ခေါ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. ဤအချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်, ထို အိပ်ပျော်နေသောရထား A-B ရထားများဖြစ်ကြသည်, လမ်းတစ်လျှောက်အဘယ်သူမျှမမှတ်တိုင်များနှင့်အတူ, ထို့ကြောင့်, အဘယ်သူမျှမကြားဖြတ်.
ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးသည်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်ရှိသည်. နှင့် အဆုံးမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများ, အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကတော့ဖုန်းကိုအပြင်ထွက်ပြီးဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်. အထူးသဖြင့်သင်ခရီးဝေးသွားသောအခါခက်ခဲသည်, ရထားပေါ်မှာ, သွားစရာနေရာမရှိ.
သို့သျောလညျး, ရထားပေါ်မှာအိပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်တွေထဲကတစ်ခုကမင်းရဲ့ဖုန်းကိုအိတ်ထဲထည့်ထားခြင်းဖြစ်တယ်, သို့မဟုတ်ပင်လေယာဉ်ခရီးစဉ် mode မှာ.
10. ရထားပေါ်မှာဘယ်လိုအိပ်ရမလဲ: စာဖတ်ခြင်းပစ္စည်းကိုယူလာပါ
ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုထက်စိတ်ကိုအေးဆေးငြိမ်သက်စေသောအရာမရှိ, ထိုသို့သင်ရထားပေါ်တွင်ကြီးစွာသောအိပ်စက်ခြင်းအဘို့လိုအပ်အတိအကျယျ. သင်အကြိုက်ဆုံးမဂ္ဂဇင်းယူလာ, သို့မဟုတ်တစ် ဦး အပေါ်စာအုပ်ဆိုင် ရထားခရီး ရထားပေါ်တွင်အိပ်ရန်အကောင်းဆုံးအကြံပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည်.
သင်ဖတ်နေသည့်အခါသင်၏စိတ်သည်အခြားနေရာတစ်ခုသို့သွားသည်, setting ကို, နှင့်တစ်နေ့လုံးရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများပျောက်ကွယ်သွားသည်. အလွန်ကောင်းမွန်သောဖတ်ရှုခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအပန်းဖြေလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်, မည်သည့်စေ့စပ်အသေးစိတ်ကိုသင့်ရဲ့စိတ်ကိုချွတ်ယူ. တစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ် ဦး သည်, သငျသညျဝေးမျော, အဲဒါကသင့်ကိုအိပ်ပျော်သွားအောင်လုပ်ဖို့လုံလောက်တယ်.
ဒီမှာ တွင် တစ်ဦးကရထား Save, မမေ့နိုင်သောရထားခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်, အကောင်းဆုံးထိုင်ခုံများနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရထားအိပ်စက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများနှင့်အတူ.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ရထားပေါ်မှာဘယ်လိုအိပ်ပျော်ဖို့နည်းလမ်း ၁၀ ချက်” ကိုသင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်တင်ချင်ပါသလဲ? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-how-sleep-on-train%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အကောင်းဆုံး အိပ် အိပ်ပျော် SleeperTrainsEurope ချစ်တယ် ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ